Rivo Rakotovao “Mila mihaino ny feon` ny vahoaka ny mpitondra”
Rajoelina sy Christophe Bouchard Nangatsiaka ny fihaonana, tsy faly ny Frantsay…
Miha lalina hatrany ny hantsana eo amin` I Madagasikara sy I Frantsa, hoy ny andian-dahatsoratra navoakan’ny gazetiboky amin`ny aterineto Africa Intelligence omaly 28 septambra 2020.
Fifidianana loholona Handeha ila raha ho raikitra, hoy ny HVM
Nanomboka tamin’ny fanambarana ofisialin’ny antoko politika maro ny 17 septambra teo tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo fa manohitra ny fifidianana loholona kasaina ho
Fifidianana loholona Mifanazava ireo teknisianina!
“Tsy maintsy miroso amin` ny fitsapankevim-bahoaka vao afaka mandrava ny CENI. Tsy maintsy hirosoana ny fifidianana loholona araka ny lalàna velona eto amin`ny firenena.
Fiainam-pirenena Gejaina ny fanoherana..
Amin` izao dia mitsangana ny fanoherana ka mijoro ireo antoko mpanohitra sy fikambanana mitsangana ao anaty fanoherana. Zava-dehibe ny fahatsapana ny tsy fetezana eto amin`ny firenena ka ilaina ny fahasahiana mijoro.
Depiote Leva Nohelohina higadra 3 taona
Niakatra fitsaràna omaly 28 septambra tao amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany ao Morondava i Raveloson Ludovic na Leva, depioten'i Mahabo teo aloha.
Raoera Chandoutis “Ampiharo ny fihavanana”
Mitaky ny hisian` ny fifanatonana eo amin`ny samy mpanao politika manoloana ny fandroritana politika amin` izao fotoana izao ny mpitarika ny firaisamonim-pirenena misahana ny zon` ny olombelona Mijoro Mampandroso Vahoaka, Rtoa Raoera Chandoutis.
Iaraha mahalala ny fahasahiranana ny vahoaka amin` ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Tsy hianona fotsiny amin` ny fidradradradrana hoe mivelona amin` ny fambolena sy ny fiompiana ny 80%-n` ny Malagasy satria tsy mahavelona izany.
Tsy afaka mamokatra ho an` ny vahoaka manontolo izy ireo. Laharam-pahamena tokoa ny fiezahana hahamatihanina kokoa ny tantsaha eo amin` ny sehatry ny fambolena hahatongavana eo amin` ny fahaleovantena ara-tsakafo. Noho izany, mila politika matotra amin` ny fivelarana ireo tanim-bary sy tanim-pambolena eto amintsika. Manamafy izany ny filohan` ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, saingy nilaza kosa izy fa tsy maintsy miaro ny Malagasy koa ny fitondram-panjakana manoloana ireo orinasa lehibe hanaovana fotodrafitrasa izay mety ilaina. Tokony mijery fandanjalanjàna amin` ny fiarovana ny tantsaha sy ny hahahafahana manao fampandrosoana isiska, hoy izy. Eo amin` ny sehatry ny fananan-tany ihany koa dia fanamby iray tsy maintsy apetraka mba hahafahan’ny tantsaha mamelo-tena sy manao ny asany am-pitoniana fa tsy hitaintain-dava, hoy izy. Raha tiana ho tratra izany fanamby izany dia mila mihaino ny feon` ny vahoaka ny mpitondra, hoy i Rivo Rakotovao. Marihana moa fa nanatrika ny seminera niarahan’ny Fikambanan’ny Antenimierandoholona mivondrona ao anatin’ny Association des Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) tany Rabbat – Maraoka ity filohan` ny andrim-panjakana ity. Nanambara moa ny Filoha Rivo Rakotovao raha nanontanian’ny mpanao gazety Marokanina fa mila ny finiavan’ny rehetra ny fiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Niompana tamin’ny lohahevitra : “Les Parlements et les défis de la sécurité alimentaire” moa izany fihaonambe izany izay nifarana ny 01 novambra lasa teo.